JOB PORTAL MYANMAR
ကုမ္ပဏီမှခေါ်သည့် အလုပ်များထဲမှ မိမိနှင့်ကိုက်ညီသည့်အလုပ်အား တိုက်ရိုက် CV ပေးပို့လျှောက်ထားြခင်းြဖင့် အလုပ်အမြန်ရနိုင်သကဲ့သို့ အလုပ်ရှင်မှ မိမိဖြည့်စွက်ထားသည့် အချက်အလက်များကို ကြိုက်နှစ်သက်၍ ဆက်သွယ်လာခြင်းဖြင့်လည်း အလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ရရှိခြင်း အလုပ်သမားရရှိခြင်းအတွက် မည်သူ့ကိုမျှဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။ ( Agency ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် ခေါ်သည့်အလုပ်များအတွက် ထိုကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)
Job Portal Myanmar Website ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုဖို ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ ?
Gmail Account တစ်ခုရှိလျှင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုရပါပြီ။ အချိန်မရွေး Register ပြုလုပ်ခြင်းအား အလိုအလျှောက် အတည်ပြုပေးသည့်စနစ်သည် လူကြီးမင်းဖြည့်သွင်းခဲ့ သည့် Gmail Account သိုပြန်လည်ပေးပိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ထိုပြန်လည်ပေးပိုသည့် Mail ထဲဝင်၍ အတည်ပြုစာသားအား နှိပ်ခြင်းဖြင့် Job Portal Myanmar ထဲသိုလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုရန် လွယ်ကူမှု ရှိပါသလား?
အသုံးပြုရန် လွယ်ကူပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို၏ ဓလေ့၊ စရိုက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်စေမည့် အရိုးရှင်းဆုံး ပုံစံဖြင့် JPM Website ကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။
Seeker တစ်ယောက် မှတ်ပုံတင်ဖိုအတွက် ဘာတွေ လိုအပ်ပါသလဲ ?
နာမည်၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Email ၊ Functional Area ( မိမိလုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်) တိုကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
Employer မှတ်ပုံတင်ဖိုအတွက် ဘာတွေ လိုအပ်ပါသလဲ?
လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် ကုမ္ပဏီ နာမည်၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Email တိုကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
Register လုပ်တာအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖိုလိုပါသလား?
မှတ်ပုံတင်ဝင်ရောက်ထားခြင်းအတွက် မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှ မရှိပါ။
Reguster လုပ်ရင် ဘာအခွင့်ရေးတွေရမှာလဲ?
လူကြီးမင်း Register လုပ်သည့် အချိန်ကာလပေါ်မူတည်၍ ပေးထားသည့် Promotion ခံစားခွင့်များကို ရရှိမည့်အပြင် အလုပ်လျှောက်မည့်အချိန်တွင် လိုအပ်မည့် လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များနှင့် CV တိုကို Web Site ပေါ်သိုတင်ထားနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။
Register လုပ်ပြီး CV နှင့်အချက်အလက်များ မတင်ထားလျှင်ရလား?
CV နှင့်အချက်အလက်များ မတင်ထားလိုလည်းရပါသည်။ တင်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ရရှိရေးအတွက် အစဉ်သင့်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Reguster လုပ်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ဖိုလိုအပ်ပါသလဲ?
အလုပ်လျှောက်ထားရာတွင် အစဉ်သင့်ဖြစ်စေမည့် သင်၏ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ အချက် အလက်များကို ဖြည့်စွက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များမှ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိ၍ ဝင်ရောက်ရှာဖွေချိန်တွင် သင်၏အချက် အလက်များနှင့် ၎င်းတို၏လိုအပ်ချက် ကိုက်ညီနေလျှင် သင့်အားအလုပ်ကမ်းလှမ်းခေါ်ယူခြင်း ကိုခံရနိုင်၍ သင်အလုပ်လျှောက်မည့်အချိန်တွင် အစဉ်သင့်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။